Iyo Apple Watch inosanganisa oximeter, asi haina kuvhurwa | IPhone nhau
Apple Watch inosanganisa oximeter, asi haina kuvhurwa
Munguva yemakore anotungamira mukutanga kweApple Watch, yaimbonzi iWatch, runyerekupe rwakakomberedza mudziyo, ivo vakatigadzirira kufungidzira kuti Apple smartwatch yaizotakura huwandu husingaperi hwemamita izvo zvinotibvumidza isu kudzora kunyangwe chidiki chidiki chehutano hwedu, kubva paglucose yeropa mita, kusvika pakumhanya kweropa kudzivirira matambudziko emoyo, kuburikidza neoximeter, iyo inotibvumidza kuyera huwandu hweoxygen muropa redu.
Mazuva mashoma apfuura takakuratidza kuputsika kwakaitwa nevakomana kubva kuFixit kuApple Watch. Zvimwe chete wawana sensor yekuyera kurova kwemoyo uye oximeter, iyo yakaremara parizvino. Kutenda kune oximeter iyo inoburitsa infrared mwenje kuti iite zviyero zvayo, isu tinokwanisa kudzora oxygen kukosheswa muropa redu. Ichi chishandiso chinogona kubatsira kwazvo kune vese vashandisi vanoenda kana kushandisa iyo Apple Watch kuongorora maitiro avo pamwe nekudzora hutano hwavo.
Kubva iFixit vanonongedzera kuzvikonzero zviviri zvinoita kuti Apple ibvise mudziyo uyu mushanduro yekutanga kunyangwe yaiswa. Chimwe chezvikonzero chaigona kuve icho zviyero zvakawanikwa hazvina kugutsa zvakakwana uye kuvhura sensor inopa mhedzisiro dzakasiyana, ivo vanosarudza kumirira chizvarwa chinotevera cheApple Watch kuti vakwanise kuishandisa chero bedzi vawana mhinduro dzakavimbika.
Chimwe chikonzero chingaitise kuti nei Apple yaremadza iyi sensor inogona kubva kuDFA. Zvichida, kunyangwe hukama nekambani yaTim Cook huchigutsa kwazvo, mutumbi uyu ungadai usina kufambisa mvumo kune avo veCupertino kukwanisa kuishandisa paApple Watch. Kana ikangowana kugamuchirwa, zvishoma software yekuvandudza inogona kumisikidza iyo Apple Watch yakavakirwa-mukati oximeter pasina kumirira zvizvarwa zvitsva zvechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inosanganisa oximeter, asi haina kuvhurwa
Maitiro ekumisikidza zviziviso paApple Watch
Ungashandura sei Apple Watch Sport kuita Edition